स्वचालित जुत्ता पालिश नरम ट्यूब भरिने सील मेसिन - Npoat.com
फ्याक्ट्री मूल्य कस्मेटिक्सको लागि औद्योगिक स्वचालित प्लास्टिक सफ्ट ट्यूब फिलिंग सीलिंग मेसिन
यो मोडेल मिसिन 12 स्टेशन डिजाइन अपनाउने। धातु ट्यूब लागि तह प्याकिङ को सबै प्रकार को लागी उपयुक्त। सजिलै प्लास्टिक ट्यूब र धातु ट्यूब महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
मोल्ड र भागहरू प्रतिस्थापन गरेर प्याकिङ। यो ALU ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब र कस्मेटिक, फार्मेसी, खाद्य पदार्थ, चिपकने आदि उद्योगहरूमा बहु ट्यूब भर्ने र सील गर्नको लागि एक आदर्श उपकरण हो, र यो GMP को मानक अनुरूप छ।
1. LCD डिस्प्ले र PLC नियन्त्रणको साथ उच्च ग्रेड अपरेशन स्क्रिन, सजिलो सञ्चालन र अधिक मानवीकरण स्टेपलेस गति समायोजन, प्यारामिटर सेट, आउटपुट गणना, दबाव सूचकांक र विफलता प्रदर्शन द्वारा।
2. स्वचालित रूपमा ट्यूब आपूर्ति, फोटोसेल दर्ता, अक्रिय ग्यास भरिने (optiona1), सामग्री भर्ने र सील, ब्याच नम्बर मुद्रण, अन्तिम उत्पादन उत्पादन।
3. उच्च प्रिभिजन फोटोसेल दर्ता, जसले क्रोमेटिक एबररेशन स्कोप घटाउँछ।
4. समायोजन भागहरू बाह्य स्थितिमा, स्थिति डिजिटल प्रदर्शन, सुविधाजनक र सटीक समायोजन (चर उत्पादनहरू उत्पादनको लागि उपयुक्त)।
5. मेकानिकल, फोटोइक्ट्रिकल, बिजुली, वायमेटिक एकीकृत नियन्त्रण, कुनै ट्यूब नो फाइलिङ प्रकार्यमा पुग्दैन: चेतावनी यदि ट्यूब त्रुटि राखिएको छ वा धेरै 10w दबाब छ भने, यो सुरक्षात्मक ढोका खोल्दा स्वचालित रूपमा रोकिनेछ।
उत्पादन स्वचालित ट्यूब भरिने र सील मिसिन
गर्मी सील शक्ति ३ किलोवाट
ट्यूब सामग्री प्लास्टिक ट्यूब, लमिनेट ट्यूब
ट्यूब लम्बाइ (मिमी) ५०-३०० (अनुकूलन योग्य)
भोल्युम भोलि 5-800ml/pcs (समायोज्य)
गति (r/min) 2.5-7
उत्पादन क्षमता (पीसी/मिनेट) ३०-७० (समायोज्य)
हावा आपूर्ति 0.55-0.65Mpa 0.1 m3/ मिनेट
मेशिन तौल 1100kg
1. हाम्रो मेसिनले ग्राहकको मागलाई कसरी राम्रोसँग मिलाउन सक्छ?
हामी तपाईंको माग पुष्टि गर्न तपाईंको भिडियो वा केही प्रश्न पठाउनेछौं। यदि मेशिन तपाईंको लागि उपयुक्त छ भने, हामी तपाईंको लागि विस्तृत परियोजना बनाउनेछौं। तपाईं हामीलाई नमूना पठाउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंको लागि भिडियो लिनेछौं। वा हामी तपाईंलाई मेशिन प्रभाव हेर्नको लागि हाम्रो कारखानामा नमूना लिन स्वागत गर्दछौं।
2. हामी क्षेत्र कारखाना वा एक व्यापारिक कम्पनी?
हामी निर्माता हौं, र 12 बर्ष भन्दा बढीको लागि उद्योगमा छौं। हामीलाई भ्रमण गर्न स्वागत छ।
3. भुक्तानी तरिका कस्तो छ?
तपाईले T/Tor LC द्वारा, वा Alibaba को व्यापार आश्वासन सेवा द्वारा, वा West Union द्वारा, वा नगद भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
4. खरिदकर्ताले अर्डर गरेपछि मेसिनको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्ने?
डेलिभरी अघि, हामी मेसिन परीक्षण गर्नेछौं। जब हामी यो निर्दोष रूपमा चल्ने सुनिश्चित गर्छौं, हामी तपाईंलाई मेसिनको तस्बिर र भिडियोहरू पठाउनेछौं। वा तपाईं आफैले जाँच गर्न हामीकहाँ आउन सक्नुहुन्छ, वा तपाईंको पक्षबाट सम्पर्क गरिएको तेस्रो पक्ष निरीक्षण संस्थाद्वारा।
कस्मेटिक प्लास्टिक क्रीम को लागी उच्च क्षमता ट्यूब भरने मेसिन
स्वचालित अल्ट्रासोनिक मेडिकल र फार्मास्यूटिकल ट्यूब भरने सील मेसिन
स्वचालित नरम छाला मलम ट्यूब भर्न र सील मेसिन